ပြည်သူရွေးကောက်ခံ စည်ပင် ကော်မတီဝင်များထဲမှ တစ်ဦးကို ရန်ကုန် ဒုတိယမြို့တော်ဝန် ခန့်မည် - Yangon Media Group
ပြည်သူလူထုရွေး ကောက်တင်မြှောက်ထားသည့် စည်ပင်ကော်မတီဝင်ခြောက်ဦးအနက်မှတစ်ဦးကို ဒုတိယမြို့တော်ဝန်အ ဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်ရန် ရန်ကုန် မြို့တော်စည်ပင်သာယာ ဥပဒေကြမ်းတွင် အတည်ပြုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဇွန် ၂၅ ရက် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပ ဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးကြပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ် တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီက ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ခန့်ထားရေး ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်သည့်အဆိုကို တင်သွင်းခဲ့ရာဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက သဘောတူခဲ့ကြခြင်းကြောင့် ယင်းအဆိုကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကြမ်း၏ အခန်း၂၊ အပိုဒ် (၃) အောက်ရှိ အပိုဒ်ခွဲ (က) တွင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသူ ကော်မတီဝင်ခြောက်ဦးအနက်တစ်ဦးကို ဒုတိယမြို့တော်ဝန်အ ဖြစ် အစိုးရတိုက်ရိုက်ခန့်နှင့် ရွေး ကောက်ခံကော်မတီဝင် ၁၁ ဦးတို့က လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရမည်။ အပိုဒ်ခွဲ (ခ) တွင် ဒုတိယမြို့တော်ဝန်သည် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည်ဟု ပြည်သူ့ ငွေစာရင်းကော်မတီက ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်သည့်အဆိုကို တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်တွင် ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ခန့်ထားခြင်းဖြင့် မြို့တော်ဝန်ကို အထောက်အကူပြု နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီး မြို့တော်ဝန် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် အခါ၌ဖြစ်စေ၊ မြို့တော်ဝန်က တာဝန်ပေးအပ်လိုသည့်အခါ၌ဖြစ်စေ၊ မြို့တော်ဝန်ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ တော်သည် နောင်လာမည့်ခုနစ်နှစ်အတွင်း လူဦးရေ ၁ဝ သန်းအထိ ရှိလာမည်ဖြစ်၍ စည်ပင်လုပ်ငန်းများသည်လည်း ပိုမိုများပြားလာမည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မြို့တော်ဝန်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ခွဲဝေ ထမ်းဆောင်မည့် ဒုတိယမြို့တော်ဝန်မှာလည်း လိုအပ်လာမည်ဖြစ် ကြောင်း ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းလွင်က အဆိုတင်သွင်းရာ၌ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
”ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ဖော်ပြထား ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် ခန့်အပ်ဖို့မသင့်ဘူးလို့ ယူဆတာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒုတိယမြို့တော် ဝန်ကိုခန့်အပ်ဖို့ ခွင့်မပြုကြောင်းလည်း ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါဘူး။ မြို့တော်ဝန်ဆောင် ရွက်ရမယ့်ကိစ္စမှန်သမျှကိုတော့ ဒုတိယမြို့တော်ဝန်က ဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ပေမယ့် အခြေခံဥပ ဒေအရအကန့်အသတ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယမြို့တော်ဝန် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ခံစားခွင့် စတာတွေကို ဥပဒေနဲ့အညီ နည်းဥပဒေပြဌာန်းပြီး ကန့်သတ်ပေးနိုင်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဒုတိယမြို့တော်ဝန်သည် နိုင်ငံဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘဲ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သည့်အတွက် ဒုတိယမြို့ တော်ဝန်အတွက် အဆောင်အ ယောင်နှင့် ခံစားခွင့်များကို ရန်ကုန်စည်ပင်ရန်ပုံငွေထဲမှ စီစဉ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့ငွေစာ ရင်းကော်မတီမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့သည်။ ရန်ကုန်စည်ပင်ကော်မတီဝင်ကို အစိုးရတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်ငါးဦး၊ ရွေးကောက်ခံကော်မတီဝင်လေးဦးမှ ပြည်သူရွေးကောက်သော ကော်မတီဝင် ပိုမိုများပြားစေရန် အစိုးရတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်ကော်မတီဝင်ငါးဦး၊ ရွေးကောက်ခံကော်မတီဝင်ခြောက်ဦးသို့ ပြင်ဆင်အတည် ပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အတုများရှိလာသဖြင့် ယာဉ်မှတ်ပုံတင် သက်သေခံ လက်မှတ်များ၏ လုံခြုံရေးကို အဆင့်မြှင့်မည်
မက္ကဆီကိုမှ လူများ အမေရိကန်ကို ကျူးကျော်နေဟု ထရန့်ပြော
ကိုရီးယား သံရည်ကျိုစက်ရုံ တစ်ရုံတွင် မြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှု အလုပ်ရှင် တာဝန်မယူသဖြင့် သံရုံးမှ ခေါ်ယူဆေးကုပေးနေရ
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၌ ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးနှင့် ရေလမ်းကောင်းမွန်ရေးဆောင်ရွက်ရန် ငွေကျပ်သန်?
အောင်လံမြို့၌ နွားစာဈေးမြင့်တက်မှုနှင့် အပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့် နွားမွေးမြူရေး လုပ်ငန??